Is’Art Galerie : hanolotra mozika mifangaro i Queen Favie | NewsMada
Is’Art Galerie : hanolotra mozika mifangaro i Queen Favie
Par Taratra sur 09/06/2017
Rehefa avy nanafana sy nandray anjara tamin’ny « Festival Donia », ho etsy amin’ny Is’Art Galerie, etsy amin’ny La Teinturerie Ampasanimalo, i Queen Favie, andriambavilanitra mpamoron-kira sady mpihira, avy atsy amin’ny Nosy La Réunion. Hisy ny fampisehoana miavaka, hotanterahiny eny amin’ity foibe ity, anio hariva.
Ho an’ny mpankafy mozika, mafonja ny kanto hoentin’ity tovovavy ity mandritra izao fahatongavany eto an-dRenivohitra izao. Matihanina izy ary azo lazaina ho mikoriana tanteraka ao anatiny ny fankafizana mozika.
Mivelatra amina mozika maroloko i Queen Favie, hany ka anisan’ny mampiavaka azy ny fahaizany milalao sy mampifangaro gadona samihafa, indrindra ny hip hop, reggae, RnB, Dance Hall, Afro, Trap. Nambarany fa manavanana azy kokoa ireo mozika ireo noho izy ireo afa-miteny amin’ny fo sy mitaky na miady ho an’ny zavatra iray. Mampiavaka an’i Queen Favie koa ny feony toy ny malefaka nefa matanjaka.
Favienne Varaine no tena anaran’ity mpanakanto ity. Nosafidiny kosa ny hoe « Queen », satria aminy, mpanjaka ny vehivavy rehetra. Ho azy ireo rahateo ny ankamaroan’ny hirany : mankahery, mitantara ny fiainany ary koa mitaky ny zo sy ny sahaza azy. Anio hariva no ahitana sy ahatsapana izany rehetra izany, etsy amin’ny Is’Art Galerie.